Andro mangatsiaka sy ny fahasalamana Tokony hihinana voankazo sy legioma betsaka
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny ririnina isika eto Madagasikara ankehitriny. Betsaka ireo karazan’aretina aterany toy ny aretin’ny taovam-pisefoana ( kohoka, sery, tenda, orona…)
izay mety hiampy fanaviana. Mila mitandrina ny tsirairay, hoy ny dokotera Fidy Bariniaina. Ankoatra ny fanaovana akanjo mafana dia mila mihinana voankazo sy legioma maro loko ny tsirairay. Mila misotro rano betsaka ihany koa ary manao fanatanjahantena. Ho an’ny ao an-tokantrano, indrindra fa ao amin’ny efitrano fatoriana dia atao azon’ny masoandro sy ny rivotra hatrany izy ireny. Tsy atao be fanaka ialana amin’ireo karazana mikraoba mety hateraky ny vovoka mitambatra. Tsara hatrany ny manatona mpitsabo raha vantany vao misy tranga hafahafa fa tsy manao dokotera tenany.